Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Fampandrosoana sy tontolo iainana
Inty sy Nday : Fampandrosoana sy tontolo iainana
Teboka iray miantoka ny fiainan’ny zava-manana aina amin’ny ankapobeny, ary ny olombelona manokana, ny fikatsahana fandrosoana. Etsy ankilany, ny fivadiky ny andro ho volana, ny volana ho taona koa anefa, tao anatin’ny asa nataon-dRaolombelona ho amin’ny fampandrosoana, dia misy ny faharavan’ny tontolo iainana, fahapotehan’ny zava-boahary, toy ny ala… ka miteraka fahavoazana ho an’ny zanak’olombelona ihany. Isan’izany ny fiovaovan’ny toetrandro. Ny faharavan’ny tontolo iainana koa dia mitarika faharavan’ny hosona ôzôna, izay miaro ny zava-manana aina tsy hivantanan’ny taratra “radioaktifa” izay mandoro ny hoditra na miteraka fahavoazan’ny maso…
Mifanipaka izany ny fiheverana ny firosoana mankany amin’ny fampivelarana ny fiainan’ny zanak’olombelona sy ny fiarovana ny tontolo iainana raha ireo no jerena.
Tsy afaka ampifamenoana ve anefa ireo? Izany hoe miezaka manao izay fomba hahafahana mampahomby ny fampandrosoana nefa tsy mamotika ny tontolo iainana? Mety ho misy ny vahaolana momba izany, ary izay indrindra no isan’ny fepetra takian’ny fiarovana ny tontolo iainana raha vao hisy orin’asa hajoro ao amin’ny tanàna iray. Izay ilay antsoina hoe “etudes d’impact environemental”. Tsy maintsy manao fanadihadiana mba hiantohana ny tsy hisian’ny ako ratsin’ilay orin’asa hajoro eo amin’ny tontolo iainana.
Misy koa ny antoka tsy maintsy apetraka mba hamatorana andraikitra ny tompon’ny tetik’asa iray fa rehefa vita ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany ao amin’ny tanàna iray, ohatra, dia tsy maintsy mamboly hazo enti-mandrakotra ny toerana voatrandraka.
Tsy voahaja tanteraka anefa izany rehetra izany satria dodona amin’ny fahazoana vokatra avy amin’ilay tetik’asam-pampandrosoana ny tompon’ny tetik’asa sy ny manam-pahefana ara-panjakana sasany. Ohatra velona amin’izany ny any Taolagnaro ao amin’ny tetik’asa QMM. Dokam-barotra tsy nisy ohatr’izany tany amin’ny taom-polo 90 nanehoana fa “ho fanarenana ny tontolo iainana aorian’ny fitrandrahana dia ho rakotra hazo maniry i Taolagnaro , indrindra fa ny faritra nitrandrahana fasimainty”. Tsy hita izany hatreto. Ilay hazo volena koa, toa tsy hanome intsony ny karazan’ilay hazo naniry teo talohan’ny tetik’asa.
Ny zava-misy izao, amin’ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany no tena maro itrangan’ny fahapotehan’ny tontolo iainana, dia misy koa ny avy amin’ny orin’asa miorina, izay matetika mamoaka akora simika.
Ny tsy azo hamaivanina koa dia hoe “ny fahaizana mitsinjo sy miaro ary mikolokolo ny tontolo iainana dia fanoitra iray ahazoana mpizahatany betsaka koa satria maro ny olona any amin’ireny tany efa mandroso ireny no tsy mahita intsony tontolo iainana voajanahary na mifanakaiky amin’izany, eny, tsy nandre feon-gidro mihitsy hatrizay niainany na tsy nahita alan-kininina mihitsy koa, ka voasarika hizahatany any amin’ny firenena manana an’izany. Fampandrosoana mifototra amin’ny tontolo iainana voakajy izany no misy amin’io.